mars 2014 – filazantsaramada
Ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any andanitra. Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao. Jao 6:32b-33 Ny hanoanana no mariky ny tsy fahampian-tsakafo, ary raha tena maharitra izany dia mety hitarika fahafatesana. Raha toa ka lalim-paka loatra izany tsy fahampiana izany dia […]
Publié parfilazantsaramada mars 28, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY MOFON’ANDRIAMANITRA
« Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka; fa Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao. » Isaia 60:20 Ny masoandro, ny volana, ny Kintana…; ireo dia nataon’Andriamanitra hiantoka fahazavana ho antsika eto ambonin’ny tany (Genesisy 1:14-19). Ao amin’ny Matio 5:45, Andriamanitra dia mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy […]
Publié parfilazantsaramada mars 21, 2014 mars 21, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ILAINA NY MAZAVA
Akany Avoko Ambohidratrimo: Miara-mijery, miara-mihaino am-pifaliana Anisan’ny mandray anjara lehibe amin’ny fanabeazana ireo ankizy sahirana tezaina amin’ireny Akany Fanarenana ireny ny FF. Mitondra ny anjara birikiny amin’ny lafiny ara-panahy, mba hananan’izy ireo toetra mendrika sy araka ny sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny hoaviny rahatrizay. Amin’ny alalan’ny fandefana Film arahina fifanakalozan-kevitra moa no entina hampitàna azy ireo ny […]
Publié parfilazantsaramada mars 20, 2014 mars 21, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANDAHARAN’ASA MOMBA NY TANORA
NY DIDY FAHA EFATRA!
« Manajà ny rainao sy reninao, araka izay nandidian’i Jehovah Andriamanitrao anao, mba ho maro andro hianao, ary mba hahita soa any amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao ho anao. » (Deot 5:16) Rehefa noforonin’Andiamanitra ny olombelona dia hatrany ampiandohana no nanomezany didy ny amin’ny tsy hihinanana ny voan’ny hazo ampovoan’ny saha. Ny fifankatiavana tsy maintsy mifamarafara, […]
Publié parfilazantsaramada mars 14, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY DIDY FAHA EFATRA!
Seminera Fampiofanana voalohany iarahana amin’ny Synodam-Paritany Horombe (SPH): Ho tohin’ny dinidinika nifanaovan’ny Pastora Zafimanjary José Thierry, Mpitondra Fitandremana Satrokala, Fileovana Ranohira sy ny Feon’ny Filazantsara ny amin’ny hanatanterahana Fampiofanana « Fampitaovana ny olona Masina » any an-toerana dia tontosa soa aman-tsara izany ny 28-29 Febroary 2014 lasa teo. Tao amin’ny Sekoly Loterana ao Ranohira moa no nanaovana […]
Publié parfilazantsaramada mars 11, 2014 mars 11, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka FF/Fiangonana
« Dia hampifandrafesiko hianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany: izy hanorotoro ny lohanao,ary hianao kosa hanorotoro ny ombelahin-tongony » (Gen. 3:15) Ny dik-dik, dia kely indrindra amin’ny antilopy, hany ka tsy taitra amin’ny fihazana azy ny liona eny amin’ny lemak’i Afrika. Kanefa kosa tsy misy olona heverina ho kely sy tsy misy antony […]
Publié parfilazantsaramada mars 7, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur JESOSY, NARATRA NEFA MPANDRESY